नायिका नम्रता श्रेष्ठको आज जन्मदिन मनाइँदै, कति बर्षमा प्रवेश गरिन ? – Articles Nepal
नायिका नम्रता श्रेष्ठको आज जन्मदिन मनाइँदै, कति बर्षमा प्रवेश गरिन ?
Articles Nepal June 14, 2019 0
काठमाडाैं : नायिका नम्रता श्रेष्ठको आज जन्मदिन मनाइँदैछ । १९८५ जुन १४ को दिन नम्रताको जन्म सुनसरीको धरानमा भएको हो । यस आधारमा आज उनी ३४औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् ।
नम्रता श्रेष्ठ नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक चर्चित मोडल र अभिनेत्री हुन् । उनले सानो संसार, मेरो एउटा साथी छ, छड्के, नोभेम्बर रेन, क्लासिकलगायत अहिलेसम्म डेढ दर्जन चलचित्रमा आफ्नो अभिनय क्षमता देखाइसकेकी छन् । उनी नेपाली चलचित्र जगतमा आउनुभन्दा अघि मोडलिङ तथा थिएटरमा लागेकी थिइन् ।
कलाकार हुँदै निर्मातासमेत बनेकी नम्रता अभिनित ‘जायरा’ यसै वर्ष रिलिज हुँदैछ । जसमा उनले बक्सर युवतीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । सो भूमिकाका लागि नम्रताले कपालसमेत छोटा बनाएकी थिइन् ।आफ्नो करियरकै सुरुवाती चरणमै निजी सेक्स भिडियोका कारण नम्रता निकै ठूलो विवादमा आइन् । तर, पनि उनले आफ्नो आत्मबल गुमाइनन् । संघर्ष गरेरै फेरि आज उनी उच्च स्थानमा आइपुग्न सफल भएकी छन् ।
Previous Post: वीर विक्रम २ को खराब समीक्षा गरेको आरोपमा प्रनेश गौतम थुनामा – भिडियाे
Next Post: ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भेट्न काठमाडौं पुगे रमेश प्रसाई – भिडियो